Somaliland: Dal ay ka jirto dimuqraadiyad Islaami ah | Somaliland.Org
Somaliland: Dal ay ka jirto dimuqraadiyad Islaami ah
February 2, 2013	By: Karthik Pottipatti
Mr Karthik Pottipatti oo wax ka dhiga Jaamacada Harvard University ayaa tilmaamay in ay Somaliland tahay dal nabadgelyo ah oo hore ugu socda hirgelinta dimuqraadiyada Islaam ah.
Mr Karthik oo wareysi la gala yeeshay waayo-aragnimada Somaliland iyada oo muddo lix bilood ah wax ka dhigayay Jaamacadda Hargeysa, waxa uu sheegay inuu yahay dal ay ka jirto dimuqraadiyad socod barad ah oo leh dastuurkiisa, qabsaday doorashooyin si nabadgelyo ah uga qabsoontay, isla markaana ay ka shaqeynayaan iskuuladii iyo Jaamacaddii.
Mar la waydiiyay waxa uu ku doortay inuu tago Somaliland, waxa uu sheegay inuu xiisayn jiray Somaliland, sababtuna ahayd iyada oo ay ka jirto dimuqraadiyad shaqaynaysaa oo aanay ciidina dibada wax saamayn ah kaga lahayn, isla markaana uu yahay dal dhistay hay’adihii dimuqraadiga ahaa isaga oo aan hore u lahayn taariikhda casriga ah dimuqraadiyad.
Wareysiga oo ay qaaday Ramaa Reddy Rasharvan, oo ka qalinjebisay Calumbia School of Journalism, oo waxa kale oo ay weydiisay aqoonsi, la’aanta Somaliland sida ay u saameynayso ardayda, waxa uu ku jwaabay maadaama aanu dalku haysan aqoonsi in aanay jireyn barnaamijiyo waxbarasho oo caalami ah oo ay ardaydu heli karaan, taasina ay tahay arrin fool xun, iyada oo aan Somaliland tahay dal dimuqraadiyadi ah oo la mid ah dalalkooda.
Waxa uu xusay in dalkani oo kaabayaashii waxbarashadu ka soo bilaabmeen gunta in ay muhiim tahay ay ardaydu tagaan dalal kale oo ay ku soo qaateen, waxbarasho baratikal ah ka dibna kula soo noqdan dalka.
Mr Karthik oo la su’aalay xaaladda amniga, waxa uu sheegay in ay tahay Somaliland dal uu ka jiro degganaansho, oo ayna dareemayn wax khatar ah, ayna dawladda Somaliland ay aad u danaynayso ka feejignaanto kooxaha argagixisada ah. Taasina ayna ahayn oo keliya booliska, balse muwaadiniinta caadiga ahi xitaa ay ka aqoonsan yihiin inay tahay Alshabaab khatar aan la eegan karin, sababtuna tahay dalka oo ku dhisan beelo oo wixii soo galeeti ah markiiba farta lagu fiiqayo.
Waxa kale oo uu xusay in uu booliiska Somaliland la shaqeeyo NGO-yo sidii loo tirtiri lahaa nabadgelyo xumida.
Mr Karthik oo ka hadlaayay ka dib markii uu maqlay aqoonsiga Mareykanku siiyay Soomaaliya waxa uu yidhi “Tani waxa ay noo tahay fursad aanu dib ugu eegayno siyaasadayada ku waajahan Somaliland, waxaanan ku rajo weynahay in aan aqoonsanno madaxbanaanida dimuqraadiyada xor ah oo Muslim ah oo ka jirta Afrika.
Previous PostImaamyada Hargeysa Oo Khudbadihii Salaadii Jimcaha Kaga Hadlay Go’aankii IngiriiskaNext PostWasiirka Hawlaha Guud Oo Ka hadlay Shirkad ay Qandaraas ku siiyeen Bixinta Liisamadda Gaadiidka	Blog